Qodobo hordhac ah oo ka soo baxay shirka Madasha wada-tashiga & G/Banaadir oo xubno ku yeelanaya aqalka sare – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qodobo hordhac ah oo ka soo baxay shirka Madasha wada-tashiga & G/Banaadir oo xubno ku yeelanaya aqalka sare
MAREEG 24 June 2016
Iyadoo la filayo in shirka madasha wada tashiga Qaran ee madaxda dowlada iyo kuwa maamul goboleedyada uga socday Baydhabo la soo gebagebeeyo galabta ayaa waxaa shirkaas ka soo baxay qodoba hordhac ah oo ku saabsan nidaamka doorashooyinka dalka.
Madaxda ku mideysan shirka wada-tashiga ayaa magaalada Baydhabo ku leh galabta kulankoodii ugu dambeeyey oo la filayo iney ka soo saaraan War murtiyeed loo dhan yahay.
Kulankii shalay dhexmaray wakiilada beesha caalamka iyo madaxda Soomaalida ayaa meesha looga saaray dib u dhac ku yimaada xiliga kala guurka, iyagoo isla meel dhigay in doorashooyinka la qabto xiligii loogu talo galay oo ah bisha Agoosto ee sanadkan.
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in shirka madasha wada tashiga ee Baydhabo ka socda uu yahay kii ugu dambeeyey, aysana jiri doonin shirar kale oo madaxda dowlada iyo kuwa maamul goboleedyadu iskugu yimaadaan.
Madaxweynaha Somalia ayaa sheegay shalay in madaxda Soomaalida iyo wakiilada beesha caalamku isla gaareen in la kala diro guddiyadii doorashooyinka ee heer Qaran iyo heer gobo ee dhowaan la magacaabay, lana sameyn doono guddiyo cusub.
Wasiirka Warfaafinta Maamulka Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Max’ed ayaa sheegay in doorashooyinka ka dhici doona magaalada Muqdisho iyo xarumaha maamul goboleedyada dalka dhaqaalaha ku baxaya ay dhabarka u ridatay beesha caalamka.
“Waxaa jirta Qodobo horudhac ah oo wakiilada Beesha Caalamka iyo madaxda dowlada gaareen, waxaa la isla gartay in doorashada ay waqtigeeda dhacdo, Guddiga doorashooyinkana ayaa laga saaray Wasiiradii Xukuumadda iyo kuwii Maamulada gelinka dambena war murtiyeed ayaa laga soo saari doonaa shirka” ayuu yiri Ugaas Xasan Cabdi Max’ed.
Dhinaca kale, Madasha Hogaamiyaasha Qaran iyo maamul gobaleedyada ayaa isku raacay in labo 2-xubnood oo ka socda Beelaha Banaadiriga lagu daro Aqalka Sare ee dalka sida uu xaqiijiyay Jaylaani Nuur Ikar gudoomiye ku-xigeenka 1aad ee Baarlamaanka.
Xubnaha Aqalka Sare oo horay u ahaa 54-xubnood ayaa 56 xubnood la gaarsiin doonaa sida lagu heshiiyey sida loo xaliyo cabashada shacabka Muqdisho.